Fanambaran’ ny foloalindahy : Hajao ny fahalalahana sy ny lalàna -
AccueilRaharaham-pirenenaFanambaran’ ny foloalindahy : Hajao ny fahalalahana sy ny lalàna
Fanambaran’ ny foloalindahy : Hajao ny fahalalahana sy ny lalàna
03/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy nisorona ny fanambarana izay notontosain’ ny foloalindahy omaly izay nahitana ny minisitry ny Fiarovam-pirenena ny Jeneraly de corps d’armé Rasolofonirina Béni Xavier, ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria, ny Jeneraly Randrianamahavalisoa Giarad, ary teo ihany koa ny minisitry ny filaminam-bahoaka Andrianisa Mamy niaraka tamin’ ireo kaomandin’ ny fibaikoana rehetra eo anivon’ ny foloalindahy isanisany , manoloana ny raharaham-pirenena misy ankehitriny. Tsiahivina tokoa mantsy fa omaly no nisy ny famoahana amboletra ireo mpiasam-panjakana teny anivon’ ny minisitera tsirairay avy, ka ireo izay tsy nanaraka ireto mpanao fihetsiketsehana ireto dia nohidiany tamin’ ny gadana ny trano, ka tsy nahafan’ireo izay tsy hanaraka ny hetsika nivoaka intsony. Miantefa amin’ izany indrindra ihany koa ny fanambaran’ny foloalindahy izay milaza fa malalaka ny rehetra amin’ ny safidy ka fandikan-dalàna ny fanerana. “ Mampitandrina fa ny fanerena, na ankolaka na mivantana ny olom-pirenena tsirairay amin’ ny safidy , dia fandikan-dalàna voafaritry ny andininy faha-10 ao amin’ ny lalàm-panorenana ; toa izany koa ny fanelingelenana ny fahalalahana fototra anan’ny tsirairay” hoy hatrany ny fanambaran’ny foloalindahy. Milaza io andininy faha-10 ao amin’ ny lalàm-panorenana io fa “ny fahalalahana mivezivezy, ny fahalalahana amin’ny fieritreretana sy amin’ny finoana dia samy iantohana ho an’ny rehetra, ary tsy azo ferana raha tsy hoe ho fanajana ny fahalalahana sy ny zon’ny hafa sy noho ny fahaterena hiaro ny filaminam-bahoaka, ny fahamendrehan’ny firenena ary ny filaminan’ny Fanjakana”.
Manoloana izay dia nampatsiahy ny rehetra ihany koa ny fianakaviamben’ ny mpitandro filaminana fa ny fihantsiana sy ny fanivaivana ny mpiray tanindrazana sy ny mpitandro filaminana dia tsy lalana mihintsy mankany amin’ ny fitoniana ary voararan’ ny lalàna. Voafaritry ny andininy faha- 24 sy 28 ao anatin’ ny lalàna 016-029 tamin’ ny 14 jolay 2016 mahakasika ny seraseram-baovao ary faizin’ ny lalàna manan-kery izany. Ankoatra izany tafiditra tao anatin’ ny fanambaran’ ny foloalindahy hatrany ny fanaraina amin’ ny fomba hentitra ny lehiben’ antoko politika voakasika izao olana politika izao, mba andray andraikitra feno sy maika amin’ ny aro riaka handravonana izao toe-draharaha izao ao anatin’ ny fotoana haingana. Noho izany rehetra izany dia miantso ny olom-pirenena tsivakivolo tsy hanaiky intsony hatao fitaovana eo am-pelatanan’ny mpanao politika , ny tafika ampy izay hoy ny fanambarana ny ra latsaka , ny aina nafoy ka aoka tsy ny fitiavan-tena , ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tseza no hanaovana sorona ny mpiray tanindrazana. Firaisana tsikombakomba ny fanekena atao fitaovana araka ny voafaritry ny andininy faha-59, 60,61 ao amin’ ny fehezan-dalàna famaizana hoy hatrany ny fanambaran’ ny fianakaviamben’ ny mpitandro filaminana
Nohamafisin’ ny mpitandro filaminana nandritra ny fanambarana ihany koa ny mikasika ny toerana saropady izay hahitana ireo fananam-pirenena, fanana iombonana , fotodrafitrasa ambenan’ny mpitandro filaminana ary voafaritra manokana ho fiarovana amin’ny mety ho fanapotehana sy fandrobana, dia tsy azo hidirana na anaovana amboletra , izay minia manao izany hoy ny fanambarana dia enjehin’ ny andininy faha-91 hatramin’ ny 101 sy ny andininy faha-327, 328,329 ao amin’ ny fehezan-dalàna famaizana malagasy .
Toa ny isan-taona, manamarika ny 3 mey, andro maneran-tany ho an’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety ihany koa i Madagasikara. Taorian’ny tany Mahajanga tamin’ny taona lasa, ny tanànan’i Toamasina indray no nampiantrano ny fankalazana ofisialy tamin’ity taona ...Tohiny
Depiote Masy Goulamaly : « Nanampy betsaka ny distrikan’i Tsihombe ny Fitondrana »